Euro 2016 : famaranana kely ny an’i Italia sy Alemaina | NewsMada
Euro 2016 : famaranana kely ny an’i Italia sy Alemaina
Par Taratra sur 02/07/2016
Anisan’ny lalao ampahefa-dalana andrasan’ny rehetra ny fihaonana eo amin’i Italia sy Alemaina, amin’ity anio ity. Lalao izay ho goavana satria hiendrika famaranana kely mihitsy.
Hitodika ao amin’ny kianja Bordeaux avokoa ny mason’ny mpankafy baolina kitra, amin’ity asabotsy ity. Lalao tena hifantohan’ny sain’ny rehetra manko ny fifandonan’ny Squadra Azzura avy any Italia sy ny National Mannschaft-n’i Alemaina. Ekipa goavana ary samy “favori”, amin’ity “Euro 2016” ny roa tonta. Heverin’ny rehetra fa izay ho tafavoaka amin’izy ireto no hibata ny amboaran’i Eoropa, amin’ity andiany ity.
Raha ny antontanisa, teo amin’ny fihaonan’ny ekipa roa tonta, tato anatin’ny dimy taona lasa no jerena dia mifandanja tanteraka. Samy nahazo fandresena iray avy sy ady sahala indroa. Raha tsiahivina, ny 29 marsa 2016, ny lalao nikatrohan’izy ireo farany, ka nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa mazava 4 noho 1 ry Rainiboto. Lalao ara-pirahalahiana, natao tany Munich, izany. Ny fifanintsanana ho an’ny Euro 2012 kosa ny nahazoan’ny Squaddra fandresena, tamin’ny isa 2 noho 1. Resy tao amin’ny kianja filalaovany tamin’io ny Alemà.
Manana olana ny Italianina
Mandalo fahasahiranana tanteraka ny Squadra Azzura, amin’ity lalao anio ity, satria tsy afaka hilalao ilay vodilaharana, Antonio Candreva sy ilay irakiraka Daniele De Rossi. Efa tsy nanatrika fanazarantena izy mirahalahy ireo omaly zoma, mialoha ity lalao ity. Voadona nandritra ny lalao nikatrohany tamin’i Soeda i Candreva, araka ny fanazavan’i Enrico Casrtelacci, mpitsabo ny ekipa.
Efa noezahina ny fitsaboana azy taorian’iny lalao iny ary efa hita fa mihatsara izy saingy tsy azo antoka 100% ny hilalaovany, araka ny fanamarihan’ny dokotera.
Voadona nandritra ny fikatrohana tamin’i Espaina, teo amin’ny ampahavalon-dalana kosa
Daniele De Rossi. Mafy ilay fahavoazana nahazo azy, ka niteraka faharerahana be teo aminy. Na efa nanao izay ho afany aza ireo mpitsabo, tsy afaka ny hanohy ny «Euro 2016», intsony ny tovolahy.